Mpanao Gazety Mpivady Voatafika Tao Makassar, Indonezia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Jona 2016 8:58 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, bahasa Indonesia, বাংলা, Română , Ελληνικά, नेपाली, Magyar, English
Efa nahangona trangam-pihoaram-pefy natao tamin'ny mpanao gazety miisa 12 ny Fikambanana Miaro ny Mpanao gazety Mahaleotena ao Makassar tamin'ity taona 2016 ity, ary tafiditra amin'izany ny fanohintohinana mandritra ny fanangonam-baovao, famotehana fitaovam-panangonam-baovao, fandrahonana, ary famelezana ara-batana. Samy tsy namoaka fanambarana momba ity fanafihana nahazo an'i Rachman sy i Lamboge ity na ny KAHMI, AJI, na ny manampahefana ao Makassar.
Samy mpanao gazety mavitrika izy roa, ka i Lamboge amin'ny ankapobeny dia miasa miaraka amin'i SINDO Trijaya FM, fantsona radio iray miorina ao Jakarta, ary i Rachman kosa miasa ho mpanao gazety fanadihadiana amin'ireo seha-baovao maro ka anisan'izany ny BaKTINews, inspiratifnews, Membunuh Indonesia ary Media Lingkungan.
Niasa niaraka ry zareo tamin'ny tantara izay heverin-dry zareo nahatonga ny trangan-javatra nahazo azy ireo. Tamin'ny dika pirinty nivoaka vao haingana tao amin'ny gazetiboky mpandala ny zon'olombelona iray Torture: Asian and Global Perspectives, tao ry zareo nanoratra ny fanesorana olona maro tao amin'ny faritra Bulogading afovoan-tanànan'i Makassar. Tsy indray mandeha fotsiny no nilazana ny tantaran'izao fanesorana olona izao rehefa nihahenjana ny toe-draharaha.